Mareykanka iyo Ruushka oo Suuriya ka heshiiyay - BBC News Somali
Mareykanka iyo Ruushka oo Suuriya ka heshiiyay
10 Sebtembar 2016
Image caption Xoghaya Arrimaha Dibadda Mareykanka, John Kerry iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Ruushka, Sergei Lavrov,
Mareykanka iyo Ruushka ayaa ku heshiiyay qorshe loogu talagalay in lagu dhameeyo colaadda ka aloosan gudaha waddanka Suuriya, iyo bilowga hannaan siyaasadeed oo ku meelgaar ah.
Xoghaya Arrimaha Dibadda Mareykanka, John Kerry, ayaa sheegay in qorshaha ay ka mid tahay 7 maalmood oo xabbad joojin ah oo dalka oo dhan ka hirgasha, kana bilaabato markii ay qoraxda dhacdo maalinta Isniinta ah.
John Kerry ayaa sheegay in heshiiskan ay suuragal tahay inuu noqdo midkii soo afjari lahaa colaadda ay ku dhinteen dadka badan ee gaaraya 500,000 ee qof.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Ruushka, Sergei Lavrov, oo laga tarjumayo ayaa dhankiisa heshiiska ku tilmaamay mid la taaban karo oo wax ku ool ah, waxa uuna intaa raaciyay in Moscow ay mar horaba u sheegtay Madaxweyne Asad-ka Suuriya inuu adeeco.
Dhanka kale ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Suuriya, Steffan de Mistura, ayaa sheegay in isfahankan uu la xiriiro soo celinta heshiiska hakinta colaadda ka socota Suuriya, iyo in marin loo baneeyo gargaarka bini'aadamnimo.